Ndakasvira sisi vemukadzi wangu! - Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakasvira sisi vemukadzi wangu!
Ndakasvira sisi vemukadzi wangu!
Ndakasvira sisi vemukadzi wangu mumwe musi vauya kuzosara nevana mukadzi wangu ayenda out nebasa.I was happily married hangu ndine mukadzi akanaka tine mwana one Jack, mumwe musi mukadzi wangu came home akandiudza kuti ainge achiyenda out nebasa for 3 days saka adeedza sister yake kuti iwuye kuzosara nemwana for those days dzaanenge asipo. Zvainge zviri zvebasa saka handina kuramba ndichibva ndati it’s okay, sisi vemukadzi wangu vakasvika iri Friday masikati apa mukadzi wangu ayinge atoyenda zvekuti pandikazosvika kumba Jack ainge atobva kuchikoro ndakasvika achitotamba nasisi vemukadzi wangu.
Takamhoresana ndokubva vayenda kukitchen kuno pakura, takadya hedu ndokutanga kutaura nyaya ndipo pavakabva vandifungisa zvakudhara kuti ndainge ndatanga kunyenga ivo then pavakandiramba ndipo pandakazonyenga munin’ina wavo, mukadzi wangu now. Ndakaseka zvikanzi ndakakuramba one day the next wainge watonyenga muni’ina wangu, If only you knew kuti ndaida to give you a chance but I thought uchadzoka futi but wakabva wadiwa nasisi vangu saka I could get in between you guys and the fact yekuti I see you guys are happy makes me happy.
Mwana akabva ayenda kunorara ndokubva tasara takagara hedu as nyaya continued apa ndainge ndakunwa doro rangu zvangu, me and my castle lite tainge tiri shamwari and mukadzi wangu ainwa savanna dry ndipo pandikawona sisi vayenda kufridge vakadzoka vakabatawo ravo beer tichibva tanwa, handina kuziva kuti maybe it was first time yavo coz pa bottle number 2 vainge vakutoita kunge munhu anwa six pack ye savanna dry yese. Vakabva vatanga kuti bamunini huyai titambe ndichibva ndaramba ndikati wadhakwa iwewe zvichibva zvanzi saka ndichakutambirai ndega.
Paakatendeuka kudai magaro ake ainge ari mahombe zvekuti ndakanzwa mboro yangu ichisimuka mudenga, sisi vakatanga kutambisa magaro zviya zvinoitwa pasong iya ye 50 magate, ndikazongowona ndavakumashure kwavo vachitambisa magaro avo pamboro yangu yainge yakamira kare.
Few minutes tichitamba ndakabva ndatanga kuvabata magaro ndokusverera mazamu ndipo paakatendeuka ndokubva atanga kundikisa, ah ah ah mukadzi aigona kukisa iyeye kupfuura sisi vake.Ndainge ndisingade kuti mwana wangu azomuka awona ndinamaiguru vake, saka takayenda ku guest room kwavairara ha mhani mukadzi wangu aisara pasi. Ndakatanga kudyiwa mboro vaiyita kunge munhu arikudya lollipop , beche ravo rainge rakatota kunge mukati maro mune katap karikuburitsa juice dzerudo. Ndakatamba nekabhinzi kavo ndikaita semunhu achatakurwa mudenga sisi vachiti ndirikunonoka kuvasvira, ndakaramba ndichitambisa kabhinzi nematinji avo zvekuti pandakazopinda kana inini zemo racho rainge ranyanyisa.
Ndakatanga kukoira so zvishoma but zemo rangu ndaitoita kunge ndatanga kusvira kare beche raidziya iroro mukati zvekuti mboro yangu yainge isina kana chance. Ndakawedzera speed yekukoira ndikanzwa sisi vemukadzi wangu vainge vatunda ka2 ndipo patikazotundirana ka 3 pamwe chete. Sisi vemukadzi wangu vanonaka kupfuura mukadzi wandakabvisira pfuma.
Source – NhauDzevakuru
Previous articleNdakarohwa nenyere ndikasvirwa nyoro nalandlord!
Next articleKusvirwa naTicha mukomana webasa muKitchen – Part 1
Kusvirwa kwandakaitwa nyoro muharare neshamwari yangu!
Nhau DzeBonde Modified date: January 18, 2019
Ndakawona beche rakaitwa kuyanikwa apa rakanunira mukati
Nhau DzeBonde Modified date: November 18, 2018